Google Chrome ကိုသုံးပြီး Google Play က Free APK ဖိုင်တွေ ကို PC ထဲတန်း ဒေါင်းမယ် ~ ITmanHOME
06:15 phone, နည်းပညာ No comments
Google Chrome ကိုသုံးပြီး Google Play က Free APK ဖိုင်တွေ ကို PC ထဲတန်း ဒေါင်းမယ်
Chrome ကို သုံးပြီး apk ဖိုင်တွေ တန်းဒေါင်းဖို့အတွက် လိုအပ်တာတွေကတော့ ...
APK Downloader Chrome Exetnsions
1. Google Chrome ကို ကွန်ပြူတာထဲကို အရင် Install လုပ်ရပါမယ်။
2. ပြီးရင် Device ID ကို သင့်ရဲ့ Android Device ထဲကို Install လုပ်ရပါမယ်။
3. APK Downloader Chrome Extension ကို Install လုပ်ရပါမယ်။
4. ပြီရင် SSL error warning ကို ပိတ်ဖို့အတွက် Google Chrome ကို ပိတ်ထားပါ။ Desktop ပေါ်က Chrome short ပေါ်မှာ Right click ထောက် properties ထဲက shortcut ဆိုတဲ့ tab ထဲမှာ target ဆိုတာကို တွေ့ပါမယ်။ အဲ့မှာ chrome.exe နောက်မှာ [space]--ignore-certificate-errors ဆိုပြီးထည့်ပါ။
ပြီးရင် Chrome ကို ပြင်ထားတဲ့ shortcut နဲ့ပြန်ဝင်ပါ။ Warning Box ကျမလာရင် SSL error warning ကို Disable လုပ်တာ အောင်မြင်သွားပါပြီ ...
Device ID ကိုလိုချင်ရင်
Dial pad ထဲမှ *#*#8255#*#* ရိုက်ပါ
Options Page ထဲမှာ Email နဲ့ Device ID တွေထည့်ပါ။
Login ဝင်ပြီးသွားပီဆိုရင်တော့ www.play.google.com ထဲမှာ စိတ်ကြိုက်ဝင်ပီး ဒေါင်းလို့ရပါပြီ ...
HackingUniversity, Computric, AndroidAuthority တို့မှ မှီငြမ်းဖော်ပြပါသည်။
အဆင်မပြေရင်လည်း Comment လေးတွေ ပေးခဲ့ကြပါဗျာ ...
နောက်ထပ် post အသစ်တွေ တင်နိုင်အောင် အမြဲ ကြိုးစားလျက် ...